ဦးဝီရသူ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဝရမ်းကပ်ရန် ခရိုင်တရားရုံးက အမိန့်ချ ~ Myanmar Online News
ဦးဝီရသူ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဝရမ်းကပ်ရန် ခရိုင်တရားရုံးက အမိန့်ချ
3:09 AM ဘာသာရေး No comments
နိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေမှု ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၁၂၄-က ဖြင့် တရားစွဲဆိုထားသော ဦးဝီရသူမှာ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသဖြင့် ၎င်းပိုင်ဆိုင်သည့် ပစ္စည်းများကို ဝရမ်းကပ်ရန် ယနေ့တွင် အနောက်ပိုင်းခရိုင် တရားရုံးမှ အမိန့်ချမှတ်လိုက်သည်။
ဦးဝီရသူမှာ ယနေ့ သြဂုတ် ၉ ရက်နေ့တွင် ရုံးတော်ရှေ့ လာရောက် အစစ်ဆေးခံရန် ထုတ်ပြန်ထားသော်လည်း မလာရောက်သဖြင့် အနောက်ပိုင်းခရိုင် တရားရုံးမှ ဦးဝီရသူ ပိုင်ဆိုင်သည့် ပစ္စည်းများကို ဝရမ်းကပ်ရန် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဝရမ်းကပ်ရန် အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သော်လည်း ရုံးတော်မှ ဦးဝီရသူ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုစာရင်းကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ခြင်း မရှိသလို တရားစွဲဆိုခံရသူ ဦးဝီရသူအနေဖြင့်လည်း ရှေ့တစ်လဖြစ်သော စက်တင်ဘာ ၉ ရက်နေ့တွင် ရုံးတော်ရှေ့လာရောက်အစစ်ဆေးခံရန် ရုံးချိန်းရက် သတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။
ယနေ့ချမှတ်လိုက်သည့် အမိန့်အရ မန္တလေးမှ ခရိုင်တရားသူကြီးက ထပ်ဆင့်လက်မှတ်ရေးထိုး၍ မဟာအောင်မြေ ရဲစခန်းမှ ဦးဝီရသူ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု ပစ္စည်းများကို ဝရမ်းစွဲကပ် စစ်ဆေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း တရားသူကြီးက တရားခွင်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ဦးဝီရသူမှာ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံရှေ့နှင့် မြိတ်မြို့နယ်တို့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော ဟောပြောပွဲများ၌ နိုင်ငံတော် အကြည်ညိုပျက်စေမည့် စကားလုံးများ ဟောပြောခဲ့ရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သောကြောင့် ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင် ဒုထွေအုပ် ဦးစန်းမင်းက တရားလိုပြု တရားစွဲဆိုခဲ့ပြီးနောက် ယနေ့အချိန်ထိ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေခဲ့ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်း ရှာဖွေဖမ်းဆီးနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ပေ။
► 2020 (3401)
▼ August (967)
ပွင့်ဖြူမြို့နယ် ကြီးအုံကြီးဝတမံတွင် ယနေ့နံနက်ပိုင...
ကချင်ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး စီးနင်လာသော မော်တော်ယာ...
တောင်ကိုရီးယားတွင် ရင်သားခွဲစိတ်ရာ ပိုးဝင်သွားခြဲ့...
မြန်မာဟက်ကာအဖွဲ့များ ထိုင်းအုပ်ချုပ်ရေး Website (၃...
ထီးချိုင့်မြို့နယ် တရားရုံးမှ အကြီးတန်းစာရေး(ဘိလစ်...
မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့မှ မူဆယ်မြို့ ခိုမုန်းရွာမ...
မိန်းမလျာကာရိုက်တာ ရိုက်တော့မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ ရန်...
သရုပ်ဆောင်၊ အဆိုတော် တစ်ဦးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ ကလေးသရ...
အင်တာနက်မှာ သတင်းကြီးနေတဲ့ သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်း အမျ...
သံလွင်တံတား - ကော့ကျိုက် - နောင်လုံ - အိန္ဒုလမ်းရှိ...
အင်းစိန်မြို့နယ်တွင် Taxi ယာဉ်ခေါင်မိုးပေါ်တက်ကနေသေ...
ပြည်တွင်းပြည်ပ သတင်းမီဒီယာများ ပါဝင်သော သတင်းအဖွဲ့...
သီပေါမြို့နယ်တွင် SSPP/SSA အဖွဲ့မှ ရွာသားများအား ...
မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့မှ ပြည်သူပိုင် ယာဉ်၊ တံတားများအား...
လဝါးနှင့်ဒွန်ဘုံးခကြားတွင် ကျောက်စိမ်းများ သယ်လာသေ...
အီတလီ ရောမမြို့ရဲ့ အမှတ်တရနေရာများကို အလည်အပတ်ရောက...
အခြေခံပညာကျောင်း ဆရာ/ဆရာမ ဦးရေ ၁၄၀၀၀ အမြန်ခန့်ရန် ...
ပင်လယ်ပြင်ကို ဦးရှင်ကြီး ပိုင်သည်ဆိုသည့် ဆွေးနွေး...
လှိုင်သာယာတွင် အလုပ်သမား ၂၅၀၀ ကျော် ဆန္ဒပြတောင်းဆို
ရန်ကုန်တိုင်းရှိ MSME လုပ်ငန်း ၁၀၀ ကို ချေးငွေ ထပ်...
လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှု စီရင်ချက် အပေါ် အမြင်မျာ
ရမန်ယူရန် ရုံးထုတ်လာသည့်အချုပ်သား ထွက်ပြေးမှုဖြစ်ပွ...
ရန်ကုန်တိုင်း မြို့နယ် ၃ ခုတွင် အလုပ်သမားများ ဆန္ဒထ...
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စုပေါင်းပြီး အမှတ်တရသီချင်းခွေစီစ...
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အမည်ဂုဏ်ပုဒ် သုံးစွဲမှု...
ချင်းနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်က စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များအတွက် ...
ရေပိုင်​နက်​​ကျော်​ဝင်ရောက်သွားသည့် မြန်မာ ၄ ဦးကို...
ချဉ်ငန်စပ် "ရွှေသမီး သရက်သီးသုပ်" စားကြမယ် !!!
မူးယစ်ဆေးပြား နှစ်သန်းခွဲ ကုန်သွယ်မှုဖြင့် ဖမ်းမိသ...
အုပ်စုဖွဲ့ဆိုင်ကယ်ခိုးယူနေသည့် လူငယ်သုံးဦး ဖမ်းမိ
အစ္စရေးဒရုန်း ၃ စင်းကို လက်ဘနွန်စစ်တပ် ပစ်ခတ်
ရေကြီးမှုကြောင့် အဖြေလွှာတင်ရက်ထပ်တိုးပေးရန် အဝေးသင...
အမေရိကန်ရေတပ် ဖျက်သင်္ဘောတစီး အငြင်းပွား တောင်တရုတ်ပ...
အမေရိကန်တပ်များ အာဖဂန်မှ ပြန်ရုပ်သိမ်းရန် စောနေသေး...
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ သန့်ရှင်းမှု အားနည်းပြီး GMP န...
ထိုင်း တရားရုံးချုပ်အနေဖြင့် ၀င်းနဲ့ဇော်တို့ အပေါ် ...
IWFM မှ ဦးဆောင်၍အလုပ်​သမား အခွင့်​အ​ရေးများကိစ္စဆန္ဒ...
တနင်္သာရီမြစ်ရေ ဒုတိယအကြိမ် စိုးရိမ်ရေအမှတ် ကျော်လွန...
သံလွင်တံတား - ကော့ကျိုက် - ဇာသပြင် (အဖြောင့်လမ်း)ရ...
ရန်ကုန်တွင် ထူးခြားဒီရေတက်နိုင်၍ ကြိုတင်ကာကွယ်ရန် ...
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တရားရုံးက လက်ထပ်စာချုပ်ပုံစံတွင် “အပျ...
ဥရောပသွားမည့် ရွှေ့ပြောင်းလှေ လစ်ဗျားကမ်းလွန်တွင် န...
ရန်ကုန်မှစစ်တွေသို့ ပို့ဆောင်မည့် ကျပ်သိန်းပေါင်း ...
ရိုးရာဝတ်စုံကို ပုံဖျက်ဝတ်ဆင်ခဲ့သော ကျော်ကျော်နန္ဒက...
တပ်မတော်က ပြုပြင်တည်ဆောက်ပြီးသည့် ၃၁ မိုင်တံတားအား...
ဝင်းနှင့် ဇော် နောက်ဆုံးအယူခံရူံးနိမ့်၊ သေဒဏ်ကို ...
လွိုင်ကော်မြို့ အတွင်း ခဲယမ်းများနှင့် မူးယစ် ဆေးဝ...
မူးယစ်ဆေးဝါးချက်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ဆက်စပ်ပစ္စည...
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီသည် မူဝါဒကောင်းများ ခေါင်းဆောင်ေ...
ဗြိတိန် ပါလီမန် ယာယီရပ်ဆိုင်းမှုအပေါ် ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြ...
K Pop စတား ရဲဌာနသို့ လာရောက်.
ဗစ်တိုးရီးယားအမှုတွင် CCTV မှတ်တမ်း Hard Disk မပါဘဲ...
မုံရွာစတိုးဆိုင်ဝန်ထမ်းများအား တိုင်းတရားရုံးက တရာ...
Su-57 အမျိုးအစား ကိုယ်ပျောက်တိုက်လေယာဉ်သစ် ရုရှာြး...
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကို တရုတ်နိုင်...
မန္တလေးမြို့ ဖိနပ်ဆိုင်တဆိုင်တွင် သေနတ်၊ ဓားနှင့် ခ...
အခွန် သုံးရာခိုင်နှုန်းအထိ လျှော့ချထားသည့် အခွန်သက...
ယခုလကုန်တွင် ရန်ကုန်၌ ထူးကဲဒီရေ မြင့်တက်မည်
မန္တလေးရှိ ဖိနပ် အရောင်းဆိုင် တဆိုင်မှ လေသေနတ်များန...
Victoria ကိုယ်တိုင်ပြောဆိုထားသည့် ဗီဒီယိုဖိုင်ကို ...
အမေရိကတွင် မော်တော်ယာဉ်များ၌ မှန်မဲ့နောက်ကြည့်ကင်မ...
SME လုပ်ငန်း ၁၀၀ ကျော်ကို ချေးငွေထုတ်ပေးရန် ရန်ကုန...
ရိုဟင်ဂျာ နောက်ဆုံးအခြေအနေ ဘင်္ဂလားဒေရှ့် နိုင်ငံခြာ...
အီရန်ကွန်ရက် နှစ်ခုအပေါ် ကန် ဒဏ်ခတ်အရေးယူ
ဗြိတိန်လွှတ်တော် ယာယီဆိုင်းငံ့ဖို့ ဘုရင်မကြီး သဘောတ...
တရုတ်နဲ့ မြန်မာ နယ်စပ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့ ပူးပေ...
ရှားပါး ယောက်သွားမျိုးစိတ်သစ်များ မြန်မာနိုင်ငံမှာ...
ဖမ်းဆီးခံ စာရေးဆရာ အရေး ၀င်မစွက်ဖို့ သြစတေးလျကို တ...
လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှု သေဒဏ် အယူခံ ထိုင်းတရားရုံး ချမှတ...
အစိုးရနှင့်မြောက်ပိုင်းလေးဖွဲ့ သြဂုတ် ၃၁ ရက်တွင် က...
တနင်္သာရီမြစ်ရေ ဒုတိယအကြိမ် ပြန်လည်မြင့်တက်ပြီး စိုး...
လာမည့်စက်တင်ဘာတွင် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်၌ လေဖိအားနည်းရပ...
လုပ်ငန်းရှင်များထံမှ ချေးငွေများပြန်လည်တောင်းရန် ဗ...
(၇) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ ထီဖွင့်ပွဲတွင် ယခင်လထက်က...
ကွတ်ခိုင် အထွက်တွင် မော်တော်ယာဉ်များ အပစ်ခံရ လူတစ်...
ဖလမ်းမြို့ပေါ်ရှိ တောင်စောင်းမြေအက်ကွဲမှု စိုးရိမ်စ...
တောင်ကုတ်တွင် ကိုရင်ကြီး ၁ပါး အသတ်ခံရ
ကျောင်းသား ၂၁၅ ဦးရှိသည့်အနက် ကျောင်းသား/ သူ ၈၀ ဦ...
အမေရိကန်နှင့် ကုန်သွယ်ရေးအငြင်းပွားမှု ဆွေးနွေးညှိ...
ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတင် အီရန် ဒရုန်းယာဉ်များကို အစ္စရေ...
အကြမ်းဖက်မှုကို သည်းခံမည် မဟုတ်ဟု ဟောင်ကောင် အုပ်ခ...
အာဆီယံ-အမေရိကန် ပင်လယ်ပြင်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု၌ ကျန်စ...
ရနောင်းတွင် ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် ဆရာဆရာမများ ပြန်လည်...
ဟောင်ကောင်အရေး တရုတ်နိုင်ငံ၏ ရပ်တည်ချက်ကို ထောက်ခံ...
ခြေဥပြင်ဆင်ရေး မရောင်ရာဆီလူးနေပါက တရားခံရှာသည့်ပွဲ...
အာဏာ၊ ငွေကြေးနောက်ကိုသာ လိုက်နေသရွေ့ လှပသောနိုင်ငံ...
ဟောင်ကောင်အရေးတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ရပ်တည်ချက်ကို ထောက...
သူပုန်တို့ တိုက်ခိုက်မှုက တရုတ် BRI စီမံကိန်းများအ...
အခွန်ငွေဖြင့် ရပ်တည်နိုင်သည့် အစိုးရဖြစ်ရေး ကြိုးပ...
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ကို နှစ်မြို့နယ်ခွဲရန် လုပ်ငန်းမျ...